အမေရိကန်ရဲ့ Boeing က ထုတ်လုပ်သည့် ကမ္ဘာ့ စွမ်းအား အပြည့်ဆုံးနှင့် ခြိမ်းခြောက်မှု အပေးနိုင်ဆုံး စာရင်းဝင် ခရုဇ် ဒုံးပျံ AGM-86 ALCMအ ကြောင်း – Shwe Ba
Homepage / International News / အမေရိကန်ရဲ့ Boeing က ထုတ်လုပ်သည့် ကမ္ဘာ့ စွမ်းအား အပြည့်ဆုံးနှင့် ခြိမ်းခြောက်မှု အပေးနိုင်ဆုံး စာရင်းဝင် ခရုဇ် ဒုံးပျံ AGM-86 ALCMအ ကြောင်း
အမေရိကန်ရဲ့ Boeing က ထုတ်လုပ်သည့် ကမ္ဘာ့ စွမ်းအား အပြည့်ဆုံးနှင့် ခြိမ်းခြောက်မှု အပေးနိုင်ဆုံး စာရင်းဝင် ခရုဇ် ဒုံးပျံ AGM-86 ALCMအ ကြောင်း
By Shwe BaPosted on October 29, 2020 October 29, 2020
AGM – 86 သည် subsonic air-launched cruise missile (ALCM) ဖြစ်သော ကြောင့် အမေရိကန် ၏ မဟာ ဗျူဟာ ဗုံးကြဲ လေယာဉ် Boeine B – 52 H Stratofortress တွင် တပ်ဆင် ပစ်လွှတ် သော ခရုဇ် ဒုံးပျံဖြစ် သည် ။ ဝေဟင် မှ မြေပြင်ပစ် ခရုဇ်ဒုံး အမျိုး အစားဖြစ် ပြီး AGM – 86 B မှာ နျူကလီးယား ထိပ်ဖူးတပ် နှင့် AGM-86C မှာ သမားရိုးကျ ထိပ်ဖူး တပ်ဖြစ် သော် လည်း AGM-86C မှာ APU ထိပ်ဖူးကို တပ်ဆင် ပစ်ခတ်သော ခရုဇ်ဒုံးများဖြစ် သည် ။ လက် ရှိ USAF တွင် AGM-86B သာ အသုံးပြု ပြီး AGM-86C/D မှာ အနားပေး လို က်ပြီ ဖြစ် သည်။ AGM – 86B ကို ၁၉၈၂ တွင် စတင် ထုတ်လုပ်ခဲ့ကာ အရေ အတွက် ၁၇၁၅ စင်း ဖြစ် သည်။
AGM-86C ကို ၁၉၉၁ တွင် ထုတ် လုပ်ခဲ့ပြီး ထုတ်လုပ် သည့် အရေ အတွက်မှာ ၂၃၉ စင်းနှင့် AGM-86D ကို ၂၀၀၁ တွင် ထုတ် လုပ်ခဲ့သော် လည်း ၅၀ စင်း သာ ထုတ် လုပ် ပေး ခဲ့ သည် ။
မဟာဗျူဟာ ဗုံးကြဲလေယာဉ် ကြီး မှ AGM-86 ALCM ကို သယ်ဆောင် ၍ ​မြေပြင် အနီးသို့ ရောက်ရှိမှ သာ တပ်ဆင်ထား သည့် Willinams International F-107-WR-10 turbofan engine ဖြင့် ဆက် လက် ပျံ သန်းခြင်းဖြစ် သည် ။
လေယာဉ် မှ မြေပြင် အနီးသို့ မရောက်ရှိ မှီ ကြားတွင် ခေါက် သိမ်းထား သည့် Wingspan ထွက် လာ ကာ ပျံသန်းမှု အတွက် အ ထောက် အကူပြုပေး သည်ကို တွေ့ရှိရသည်။ AGM-86 ALCM တွင် ပစ်ခတ်မှုလမ်းညွှန်စနစ်အတွက် Litton inertial navigation system ဖြင့်လုပ်ဆောင် သည်။ Litton တွင် Terrain Contour Matching(TERCOM) ပါရှိသည်ဟု ဆိုသည်။
AGM-86 ALCM အ နေ ဖြင့် အ လေး ချိန် ၁၄၃၀ ကီလို ဂရမ် နှင့် အလျား ၆. ၃၂ မီတာ(၂၀. ၇ ပေ)၊အချင်း ၆၂၀ မီလီမီ တာ ရှိ သော ခရုဇ် ဒုံးပျံဖြစ် သည် ။ ပစ်ခတ်နိုင် မှု အကွာအဝေး အ နေ ဖြင့် AGM-86B မှာ မိုင် ၁၅၀၀ ကျော် နှင့် AGM-86C မှာ ၆၈၀ မိုင် ဖြစ် သည် ။
AGM-86 ALCM အနေဖြင့် Mach 0.7 ဖြင့် ပျံသန်း တိုက် ခိုက်သောကြောင့် subsonic cruise missile ဟုခေါ်ဆို နိုင်သည်။ လက်ရှိအသုံးပြုလျှ က် ရှိသော AGM-86B မှာ တစ်စင်းလျှင် ဒေါ်လာ ၁ သန်း ဖြစ်သည်။ AGM-86C အနေဖြင့် ၉၀၈ ကီလိုဂရမ် ရှိသော သမားရိုးကျထိပ်ဖူး ကို တပ်ဆင်ထားသော်လည်း AGM-86B တွင် ၂၀၀ ကီလိုဂရမ် ရှိသော W8D-1 nuclear warhead ကိုတပ်ဆင်ထားရှိ သည် ။
crd : Ko ko Lin Oo
AGM – 86 သညျ subsonic air-launched cruise missile (ALCM) ဖွဈသော ကွောငျ့ အမရေိကနျ ၏ မဟာ ဗြူဟာ ဗုံးကွဲ လယောဉျ Boeine B – 52 H Stratofortress တှငျ တပျဆငျ ပဈလှတျ သော ခရုဇျ ဒုံးပြံဖွဈ သညျ ။ ဝဟေငျ မှ မွပွေငျပဈ ခရုဇျဒုံး အမြိုး အစားဖွဈ ပွီး AGM – 86 B မှာ နြူကလီးယား ထိပျဖူးတပျ နှငျ့ AGM-86C မှာ သမားရိုးကြ ထိပျဖူး တပျဖွဈ သျော လညျး AGM-86C မှာ APU ထိပျဖူးကို တပျဆငျ ပဈခတျသော ခရုဇျဒုံးမြားဖွဈ သညျ ။ လကျ ရှိ USAF တှငျ AGM-86B သာ အသုံးပွု ပွီး AGM-86C/D မှာ အနားပေး လို ကျပွီ ဖွဈ သညျ။ AGM – 86B ကို ၁၉၈၂ တှငျ စတငျ ထုတျလုပျခဲ့ကာ အရေ အတှကျ ၁၇၁၅ စငျး ဖွဈ သညျ။
AGM-86C ကို ၁၉၉၁ တှငျ ထုတျ လုပျခဲ့ပွီး ထုတျလုပျ သညျ့ အရေ အတှကျမှာ ၂၃၉ စငျးနှငျ့ AGM-86D ကို ၂၀၀၁ တှငျ ထုတျ လုပျခဲ့သျော လညျး ၅၀ စငျး သာ ထုတျ လုပျ ပေး ခဲ့ သညျ ။
မဟာဗြူဟာ ဗုံးကွဲလယောဉျ ကွီး မှ AGM-86 ALCM ကို သယျဆောငျ ၍ ​မွပွေငျ အနီးသို့ ရောကျရှိမှ သာ တပျဆငျထား သညျ့ Willinams International F-107-WR-10 turbofan engine ဖွငျ့ ဆကျ လကျ ပြံ သနျးခွငျးဖွဈ သညျ ။
လယောဉျ မှ မွပွေငျ အနီးသို့ မရောကျရှိ မှီ ကွားတှငျ ခေါကျ သိမျးထား သညျ့ Wingspan ထှကျ လာ ကာ ပြံသနျးမှု အတှကျ အ ထောကျ အကူပွုပေး သညျကို တှရှေိ့ရသညျ။ AGM-86 ALCM တှငျ ပဈခတျမှုလမျးညှနျစနဈအတှကျ Litton inertial navigation system ဖွငျ့လုပျဆောငျ သညျ။ Litton တှငျ Terrain Contour Matching(TERCOM) ပါရှိသညျဟု ဆိုသညျ။
AGM-86 ALCM အ နေ ဖွငျ့ အ လေး ခြိနျ ၁၄၃၀ ကီလို ဂရမျ နှငျ့ အလြား ၆. ၃၂ မီတာ(၂၀. ၇ ပေ)၊အခငျြး ၆၂၀ မီလီမီ တာ ရှိ သော ခရုဇျ ဒုံးပြံဖွဈ သညျ ။ ပဈခတျနိုငျ မှု အကှာအဝေး အ နေ ဖွငျ့ AGM-86B မှာ မိုငျ ၁၅၀၀ ကြျော နှငျ့ AGM-86C မှာ ၆၈၀ မိုငျ ဖွဈ သညျ ။
AGM-86 ALCM အနဖွေငျ့ Mach 0.7 ဖွငျ့ ပြံသနျး တိုကျ ခိုကျသောကွောငျ့ subsonic cruise missile ဟုချေါဆို နိုငျသညျ။ လကျရှိအသုံးပွုလြှ ကျ ရှိသော AGM-86B မှာ တဈစငျးလြှငျ ဒျေါလာ ၁ သနျး ဖွဈသညျ။ AGM-86C အနဖွေငျ့ ၉၀၈ ကီလိုဂရမျ ရှိသော သမားရိုးကထြိပျဖူး ကို တပျဆငျထားသျောလညျး AGM-86B တှငျ ၂၀၀ ကီလိုဂရမျ ရှိသော W8D-1 nuclear warhead ကိုတပျဆငျထားရှိ သညျ ။
Previous post ဆက်ဆီ ကျကျ အမိုက် စား ကကွက်လေး တွေနဲ့ ပုရိသ တွေကို ညို့အား ပြင်းပြင်း ဆွဲဆောင် လိုက်ပြန် တဲ့ သဇင်ဦး
Next post မို့မောက် ပြည့် တင်း တဲ့ ခန္ဓာ ကိုယ် လေးကို လှုပ်ခါ ရမ်းပြီး ကပြ နေတဲ့ ချိုဇင်ဝင်းပြည့် ရဲ့ ဆက်ဆီ ကျကျ အက ဗီဒီယိုလေး
အမြိုးသားထုကွီးရဲ့ နှလုံးသားတှကေို ကိုငျ…
လှပလှနျးတဲ့ ကိုယျလုံးလေးကို လှုပျခါပွီး …
ကကှကျဆနျးလေးနဲ့ ခန်ဓာကိုယျလေးကို ခပျကွမျ…
ရသေူမလေးလို ရကေူးကနျထဲမှာ အမိုကျစားရကေူး…
ပုရိသတို့ရဲ့ စိတျတှေ အရမျးလှုပျရှားသှားစ…
ပုရိသတို့ကို ရငျခုနျလား မခုနျလားဆိုတာစမျ…
ရငျဖိုစရာပုံစံလေးနဲ့ ရကေူးကနျထဲမှာ အသဲယာ…